असार ९, २०७६ १०:०६:३६
‘प्रेम गीत ३’ को शीर्ष भूमिकामा मनिष राउत फाइनल जेठ ३१, २०७६
आमिर खानको साथमा लाल 'सिंह चड्डा'मा करिना देखिने जेठ ३१, २०७६
प्रियंका चोपडाले उडाइन् सलमानको फिल्म भारतको मजाक जेठ ३१, २०७६
जताततै भारतको चर्चा तरपनि सय करोड क्लबमा आयो अजय देवगनको यो फिल्म अजय देवगन, तब्बू र रकुलप्रीत स्टारर फिल्म ‘दे दे प्यार दे’ सय करोड क्लबमा संलग्न भइसकेको छ । यो फिल्म आफ्नो रिलिजपछि नै मनोरञ्जनात्मक स्क्रिप्टका कारण चर्चामा थियो र फिल्मले सोसल मिडियामा अत्यधिक प्रचार पनि पाएको थियो । जेठ ३१, २०७६
गिरिजा अधिकारीको ‘ ए सरकार २’ रिलिज, भष्ट्राचार र घुसखोरीको अन्त्य कहिले.....? (भिडियो) गीतकार, साहित्यकार एवं पत्रकार गरिजा अधिकारीको ‘ ए सरकार २’ रिलिज भएको छ । ‘ए सरकार’ गीतले सफलता प्राप्त गरेपछि ‘ए सरकार २ ’ को म्युजिक भिडियो बिहिबार भीमफेदी गाईजको आधिकारीक यूटुब च्यानलबाट सार्वजनिक गरिएको हो । जेठ ३०, २०७६
‘पासवर्ड’ गीत: यस्तो छ सन्नी लियोनीको नेपाली आइटम डान्स बलिउड अभिनेत्री सन्नी लियोनीले आइट नृत्य गरेको फिल्म ‘पासवर्ड’को गीत सार्वजनिक भएको छ । बिहिबार राजधानीमा एक कार्यक्रमका बीच गीत सार्वजनिक गरिएको हो । ‘आजको साम’ बोलको आइटम गीतमा सन्नी बोल्ड अवतारमा देखिएकी छन् । जेठ ३०, २०७६
९ वर्ष जेठा सलमान खानकी आमाको भूमिका निभाएका कारण ट्रोल भइन् यी नायिका भारत फिल्म आफ्नो कमाईका कारण चर्चा छ । फिल्ममा सलमान खान र कट्रिना कैफको केमेस्ट्रीको पनि निकै तारिफ भइरहेको छ । तर एक नायिका छिन् जो फिल्ममा आफ्नो भूमिकाका कारण ट्रोल भइरहेकी छिन् । जेठ ३०, २०७६
दुई महिना रिह्याब सेन्टरमा बसिन् ऋतिक रोशनकी दिदी सुनैनाः भन्छिन्, ‘आमा–बुवाबाट अलग्गिन चाहन्छु’ ऋतिक रोशनकी दिदी सुनैनाले रक्सीको लतका कारण आफू दुई महिना रिह्याब सेन्टरमा बसेको खुलासा गरेकी छिन् । स्पटबोयको खबरका अनुसार उनले यो कुरा अन्तरवार्तामा बताएकी हुन् । जेठ २९, २०७६
कट्रिना कैफले दिइन् दीपिका पादुकोणलाई टक्कर, बनाइन् यो रेकर्ड कट्रिना कैफको फिल्म भारतले बक्स अफिसमा चार दिनभित्र १ सय २२ करोडभन्दा बढी कलेक्सन गरेको छ । भारतले सय करोड क्लबमा समावेश हुनका लागि कट्रिना कैफले दीपिका पादुकोणको रेकर्डको बराबरी गरेकी छिन् । जेठ २७, २०७६
तपाईलाई थाहा नहुन सक्छ सलमान खानका यी १० रोचक तथ्य चर्चित बलिउड अभिनेता सलमान खानको फ्लिम भारत अहिले हलहरुमा चलिरहेको छ । जेठ २७, २०७६
सलमान खानको ‘किक टु’ को निर्देशन गर्नेछन् रोहित शेट्टी ? बलिउड निर्देशक रोहित शेट्टी र सलमान खान कुनै फिल्ममा काम गर्ने खबर केही समय अघि सार्वजनिक भएको थियो । भारतको प्रोमोशनको क्रममा सलमानले रोहितसँग एउटा प्रोजेक्टमा कुरा भइरहेको बताउँदै सबै कुरा मिले चाँडै नै यसबारे मिडियालाई जानकारी दिने बताएका थिए । जेठ २७, २०७६
के साच्चि नै धूम–४ मा भिलेको भूमिका खेल्दै छन् शाहरुख खान ? सुपरस्टार शाहरुख खान आदित्य चोपडाको व्लकबास्टर हिट फिल्म धूमको चौथो भागमा भिलेनको भूमिकामा खेल्न सक्ने समाचारहरु सार्वजनिक भएका छन् । जेठ २७, २०७६
आज राजेश हमालको जन्मदिन: आफ्ना ट्रोलमा आफै रमाउँछन् हमाल महानायकको उपाधि पाएका राजेश हमाल उमेरले ५० कटिसकेका छन् । तर उनको जोश अझै उस्तै छ, जस्तो जोश उनी यो क्षेत्रमा आउँदा थियो । नेपाली अभिनेतामा बौद्धिक अभिनेताका रुपमा समेत चिनिने राजेश हमाल हालै टेलिभिजन शो ‘को बन्छ करोडपति’ मार्फत दर्शकमाझ आएका थिए । जेठ २६, २०७६
बलिउड गायिका नेहा कक्करको संगीतिक कार्यक्रमबाट ३ प्रकाउ राजधानीको ठमेलमा बलिउड गायिका नेहा कक्करको संगीतिक कार्यक्रममा तनाव सृजना भएको बताइएको छ । कार्यक्रम लड अफ ड्रिंस क्लबमा भएको हो। जेठ २६, २०७६
मेकअप बिना देखिइन् करिना कपुर, मानिसहरुले भने ‘बुढी’ बलिउड नायिका करिना कपुर खानको एउटा तस्बिर इन्टरनेटमा चर्चा बटुलिरहेको छ । यो तस्बिरमा करिना बिना मेकअप देखिएकी छिन् । हुन त उनी मेकअप बिना पनि निकै राम्री देखिएकी छिन् । तर सोसल मिडियामा कमेन्ट गर्नेहरुको मुख कसले बन्द गर्न सक्छ र ? यो तस्बिरमा मानिसहरु करिनामाथि विभिन्न टिप्पणी गरिरहेका छन् । कर्णिका सिंह नामकी एक प्रयोगकर्ताले करिनालाई उमेरभन्दा पनि बुढी देखिएको बताएकी छिन् । जेठ २६, २०७६
यी ‘राष्ट्रपति’ जो ग्ल्यामर्सकै कारण सधैँ चर्चामा रहन्छिन् युरोपियन राष्ट्र क्रोएसियाकी राष्ट्रपति सधैँ चर्चामा रहन्छिन् । राष्ट्रप्रमुख भएका कारण पदीय हैसियतमा उनी चर्चित हुनु स्वभाविक हो । त्यो भन्दा पनि उनको ग्ल्यामर्सका कारण झन बढी चर्चा चुलिन्छ । जेठ २६, २०७६